အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး 24 စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး 24 စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
အလွန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှင့် chic သောစူပါစစ်ရေးတက်တူးထိုးရတဲ့အတွက်, သင်ဖက်ရှင်အကြောင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လျှင်ဿုံဆွဲကိုကူညီနိုင်သူတစ်ဦးကျွမ်းကျင် tattooists ရဖို့ရှိသည်။
သင်ကသင့်ရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ရှိလူများတက်တူးအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော် ပို. ပို. လူများက၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်မြင်နေနေကြပါတယ်နှင့်အတူသိရှိနိုင်ဖို့လာကြပြီလမ်းထူးခြားသောရှာဖွေနေမှကြွလာသောအခါ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းစစ်ရေးတက်တူးအများအပြားမျိုးရှိပါတယ်။
1 ။ စူပါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Tattoos ဒီဇိုင်း
2 ။ လူတို့သညျအဘို့စစ်တပ်တက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
3 ။ အစွမ်းသတ္တိကိုစစ်တပ်တက်တူး
သငျသညျဤကဲ့သို့သောသဘာဝကျပါတယ်တဲ့စစ်တပ်တက်တူးထိုးကြတဲ့အခါ #military တက်တူးထိုး inking များအတွက်အခြေခံအကျဆုံးနည်းလမ်းများအကြားတစ်ဦးက standout သာထင်ရှားစေနိုင်ပါတယ်
4 ။ အကောင်းဆုံးအောက်မေ့ဖွယ်စစ်ရေးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
5 ။ cool စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Tattoo
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, ငါတို့သည်သင်တို့မာနထောင်လွှားခံစားရပါစေနဲ့နောကျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက inking မငြူစူသောစိတ်ခံစားမိစေနိုင်သည်ဤစစ်ရေးတက်တူးမြင်နေရသည်။
6 ။ လူတို့သညျလကျဘို့စစ်တပ်တက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
7 ။ အစွမ်းထက်စစ်ရေးတက်တူး
တစ်ဦး eyeliner #tattoo စစ်တပ်တက်တူးထိုးရှိခြင်းသင်ကထိရောက်စွာပြုမိသောအခါရှိသည်ဖို့လိုအပ်သောအရာတစျခုဖြစ်လာကြပါပြီအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောနွေး lathery ရေနှင့်မစိုက်ချွတ်ဆေးကြောပါလိမ့်မယ်။
8 ။ ယောက်ျားပခုံးပေါ်မှာအေးမြစစ်ရေးတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
သငျသညျစစ်ရေးတက်တူးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါသူကသင်န်းကျင်ကဘာလဲဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ယူမယ်လို့ယူဆရသည်။ သင်ပြုမိပါပြီအခါ, သငျသညျလုပျနိုငျလာမယ့်အရာသင်ကနေရာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
9 ။ Heroric စစ်ရေးတက်တူး
သငျသညျသငျနှငျ့အတူစိတ်ကူးများနှင့်စိတ်ကြိုက်၏ပေါင်းစပ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့တက်တူးထိုးရာအရပ်သာ actualized နိုင်ပါသည်။ Gone ကလူကိုတကယ်အွန်လိုင်းသူတို့မြင်ကောင်းသော #designs တန်ဖိုးထားကြဘူးအခါရက်ပေါင်းများမှာ
10 ။ စစ်ရေးစွပ်အိတ်တက်တူး
11 ။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စစ်ရေးတက်တူး
12 ။ ယောက်ျားပခုံးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစစ်ရေးတက်တူး
13 ။ cool စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Tattoo
14 ။ ယောက်ျားပခုံးပေါ်မှာစစ်တပ်အောက်မေ့ဖွယ်တက်တူး
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတော်များများတဦးချင်းစီစစ်ရေးတက်တူး၏အသွင်အပြင်မြတ်နိုး, သေးသောသူတို့ဘယ်လောက် changeless များအတွက်ဂရုမစိုက်ကြဘူး။
15 ။ အမိုးအကာစစ်ရေးတက်တူး
16 ။ နောက်ကျောယောက်ျားအပေါ်စစ်ရေးအောက်မေ့ဖွယ်တက်တူး
17 ။ ယောက်ျားပခုံးပေါ်မှာရိုးရှင်းတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအောက်မေ့ဖွယ်တက်တူး
ဤသည်ထိုနည်းတူတဦးတည်းဖြည့်လိုအပ်တဲ့ Hardware နဲ့ညှဉျးဆဲနဲ့ပြဿနာရှိသူတို့ကလူများအတွက်စုံလင်သောအဖြေဖြစ်ပါတယ်။
18 ။ ယောက်ျားပခုံးပေါ်မှာသတိရအောက်မေ့တက်တူးဒီဇိုင်း
မမြဲတက်တူးရှာဖွေနေသည့်အခါအမှတ်မှာသုံးစွဲနိုင်ကွဲပြားခြားနားအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ decal, သူတွေဟာ glamorized နှင့်ဟင်္ရှိပါတယ်။
19 ။ နောက်ကျောအပေါ်အံ့သြဖွယ်စစ်ရေးတက်တူး
မမြဲတက်တူးဤအမြိုးမြိုးစီဗေဒနှင့်အတူ wearer furnishes သူတို့တပ်မက်သောထိုသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှအလေးပေး။
20 ။ cool စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအောက်မေ့ဖွယ်တက်တူး
အဆိုပါ decal နှင့်ဒီဂျစ်တယ်သူတွေကိုကလေးအဆီနှင့်သို့မဟုတ်အရက်ပွတ်နယ်ဖြုတ်များမှာန့။ ဟင်္နာတော-based တက်တူးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အသွားသို့မဟုတ်မဟုတ်တော့ဒီကသင်၏ရွေးချယ်မှုလျှင်ဒါသည်တက်တူးထိုး၏နီးမဆိုပြဿနာများကိုဖန်တီးမည်မဟုတ်အာမခံစောင့်ရှောက်လော့။
21 ။ တော်တော်လေးစစ်ရေးတက်တူး
ဒီနောက်ကွယ်ကအများဆုံးရအရေးကြီးသောရှင်းလင်းချက်အကြားတစ်ဦးက standout အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီ, အထူးသဖြင့်နုပျိုကလေးများသည်မမြဲတက်တူးအများစုအထူးသဖြင့် decal ဌန်အသုံးချနှင့်ဝတ်ဆင်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။
22 ။ သင်တို့အဘို့အအေးမြစစ်ရေးတက်တူးစိတ်ကူး
23 ။ သင်တို့အဘို့အအေးမြစစ်ရေးအောက်မေ့ဖွယ်တက်တူးစိတ်ကူး
သငျသညျကိုရွေးချယ်ခြင်းကြသည်တလုံခြုံမှုအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးစေရန်, သငျသညျအခြို့သော Key ကို element တွေကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကောက်နေသောတက်တူး hypoallergenic နှင့် Non-အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ဤရွေ့ကားအမြိုးမြိုး, အထူးသဖြင့်, အရေပြားမှအနှောက်အယှက်နုပျိုလူငယ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအသားအရေကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
24 ။ အကောင်းဆုံးစစ်ရေးအောက်မေ့ဖွယ်တက်တူးဒီဇိုင်း
လိပ်ပြာတက်တူးခြေလျင်တက်တူးရေဘဝဲတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးဂီတတက်တူးနှလုံး Tattoosပန်းပွင့်တက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးချစ်စရာတက်တူးစုံတွဲတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးစိန်တက်တူးKoi ငါးတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးအစ်မတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးပန်းချီတက်တူးလတက်တူးဆင်တက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးFeather Tattooအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးဟင်္တက်တူးငှက်တက်တူးခြေကျင်း Tattoosလက်တက်တူးမြှားတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းကြောင်တက်တူးနေရောင်တက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosမျက်စိတက်တူးrip တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးလက်တက်တူးတက်တူးထ